Ireo Nevado 5 manan-danja indrindra ao Però | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | America, Toerana fitsangatsanganana, Inona no ho hita
Manana endrika mahafinaritra ny Tany ary raha mieritreritra ny fomba namoronana azy ireo isika, nandritra ny taonjato maro, niaraka tamin'ny fihetsiketsehana tampotampoka sy mahafaty ny takelaka sy ny takelaka tektonika, dia vao mainka mahafinaritra kokoa izy ireo.
La Cordillera de los Andes dia iray amin'ireo tandavan-tendrombohitra mahavariana eran'izao tontolo izao ary ny be indrindra tamin'izany miampita ny mombamomba ireo firenena amerikana tatsimo maromaro eo am-piandrasana azy. Iray amin'ireo firenena ireo i Peroa ary ny tendrombohitra misy azy miaraka amin'ny oram-panala maharitra mandrakizay dia lasa toeram-pizahan-tany ho an'ny tendrombohitra tsara indrindra. Andao hofantarina ny tendrombohitra feno lanezy ao Però.
Ny Andes Mountains dia mamaritra ny lafiny iray any Kolombia, ampahany amin'i Venezoela, Ekoatera, Bolivia, Peroa, Silia ary Arzantina. Ny haavon'ny havoana dia efatra arivo metatra fa Aconcagua, ny tampony avo indrindra, amin'ny tany Arzantina, dia mahatratra 6960 metatra ny haavony ka manaraka azy hatrany Himalaya.
Afaka nilaza isika fa ny Andes no tampontron'i Amerika ary tsy ho diso isika. Ho fanampin'izany, mamonjy ireo volkano amin'ny haavo avo indrindra eto an-tany sy mandeha 7240 kilometatra tanteraka. Rehefa mamarana ny diany lavitra mifanila amin'ny Oseana Pasifika izy, dia milentika ao anaty rano ao amin'ny Atlantika atsimo, amin'ny haavon'ny Isla de los Etazonia, ary, amin'ny lafiny iray hafa, saika any amin'ny Ranomasina Karaiba.
Ireo geology dia milaza fa io tandavan-tendrombohitra amerikana io noforonina tamin'ny alàlan'ny famindrana ny takelaka Nazca teo ambanin'ny takelaka amerikana tatsimo, manakaiky ny faran'ny vanim-potoana farany Cretaceous na ambony Cretaceous, ny vanim-potoana farany tamin'ny vanim-potoana Cretaceous izay nifarana 66 tapitrisa taona lasa izay. Fihetsiketsehana fampidinana an-keriny ka ny vokany dia misy hetsika volkano manaraka ny halavany.
Ireo antsoina hoe tendrombohitra feno lanezy ao Però dia ao afovoany Andes, sehatra iray izay ahitana ny Andes of Bolivia, Argentina, Chile ary Peroa. Ny Inca dia nanome anarana an'io teny io Apus hatrany an-tampon'ny ranomandry mandrakizay ary izy ireo no nanjary fitetezana tendrombohitra, fitsangantsanganana an-tongotra ary fitsangatsanganana.
Ity massif misy satroka oram-panala ity dia ao amin'ny departemantan'i Ancash, Peroa afovoany. Avo be izy avy eo 6768 metatra ny hahavony ary manana totaliny amin'ny fihaonambe telo misy fahasamihafana kely eo amin'ny halavany. Ny habetsahan'ny granita rakotra tany, zavamaniry ary lanezy dia niforona dimy tapitrisa taona mahery lasa izay.
Izy no tendrombohitra fahadimy avo indrindra any Amerika Ary satria resaka fomba fijery ny zava-drehetra, raha refesina ny haavon'ny afovoan'ny tany dia io no tendrombohitra avo indrindra faharoa manerantany, izany hoe, efa ho roa kilometatra mihoatra ny Tendrombohitra Everest.
Lohasaha lalina roa no mampisaraka azy amin'ny tandavan-tendrombohitra, lohasaha, araka ny iantsoana azy ireo eto. Ao amin'ny lohasaha voalohany no misy ny National park huascaran, miaraka amin'ireo farihy sy ny velaran-tany fizahan-tany toy izany. Ny faharoa tsy dia malaza loatra, fa tsy izay no tsy fananany hatsaran-tarehy na firaketana an-tsoratra: Izy io no manana ny tionelin'ny fiara avo indrindra eto an-tany: 4732 metatra.
Raha iray amin'ireo tampon-tampona niakatra an-tampon'ny 1908, ary vehivavy amerikanina atao hoe Annie Peck no nanao azy, ny tampon'ny tampon'isa hafa dia tsy hitsidika afa-tsy ny lehilahy amin'ny 1932. Ny valan-javaboary dia World Heritage Site nanomboka ny taona 1985, tahiry Biosfera noho ny lagoon sy ny glaciers, izay efa ho telopolo no isan'izy ireo.
Ity dia tendrombohitra iray hafa ao amin'ny departemantan'i Ancash Peroviana ihany. Mirefy 5947 metatra amin'ny haavony ary maizin'ny ranomandry sy vatolampy izay ananan'ny manam-pahaizana manokana maro izany la Tendrombohitra tsara tarehy indrindra eto an-tany.
Toa piramida amin'ny fahalavorariana lehibe ary na dia tsy ranomasina avo aza dia tsara tarehy tokoa ka hadinony tsy ho ela ny pitsopitsony. Ny tanàna akaiky indrindra hanombohana ny traikefa nahafantarana an'ity tendrombohitra Peroviana ity dia 467 kilometatra miala an'i Lima ary Caraz.
Lehilahy tandrefana, tsy ho fantatsika velively raha nisy olona nandeha lavitra teo alohan'io, nahatratra ny tampon'ny 30 tamin'ny taonjato faharoapolo. Androany ny làlana mahazatra ahatongavana any amin'ny tampon'isa dia ilay nosokafan'ny vondrona mpihanika italiana efa-polo taona lasa izay, manaraka ny atsinanana atsimoatsinanana. Tsy mora ary arak'izay lazain'izy ireo, toa ny Himalaya io.
Ity tendrombohitra feno lanezy ity dia miorina hatramin'ny taona 2001 izay faritra voaaro ao amin'ny departemantan'i Junín ao Peroviana. Manana tampon-tampona marobe izy ary 5557 metatra ny haavony raha ny ambany kosa dia eo ambanin'ny 5530 metatra fotsiny. Taty aoriana, toy ny tampon'ny tampon'ny haavo ampiana, mihoatra ny dimy arivo metatra ny haavony. Fahasoavana re izany!
Azontsika atao ny mamaritra azy io ho toy ny tandavan-tendrombohitra kely izay misy adiny roa amin'ny fiara avy ao amin'ny tanànan'ny Huancayo, ary afaka valo ora miala an'i Lima. Ny toby fiakarana hianika azy dia efatra metatra ny haavony ary avy eo ny mpihanika dia afaka manaraka làlana roa.
Ity tendrombohitra ity dia hita ihany koa ao amin'ny departemantan'i Ancash sy mirefy 6395 metatra ny haavon'ny. Any afovoan'ny rahona sy ny lanezy no afenin'izy ireo tampon-tampon'ny efatra lanezy. Any avaratry ny ranomandry Huascarán no misy azy ary avy any amin'ny lohasaha na renirano Llanganuco no misy ireo mpiorina tendrombohitra.
Io dia ao anatin'ny sehatra fantatra amin'ny anarana hoe Cordillera Blanca, tandavan-tendrombohitra misy tendrony misy lanezy izay mandehandeha amin'ny morontsiraka andrefan'i Peroa sahabo ho 180 kilometatra ary ny atiny, toy ny harena, dia misy glasiter mihoatra ny enin-jato, tampon-tampon'ny oram-panala ary maro any amin'ny dimy metatra mahery haavo, laguna an-jatony ary renirano am-polony.
Izy io koa dia iray amin'ireo tampon-tampon'ny oram-panala an'ny Cordillera Blanca. Misy tampon-tampony efatra, mahatratra ny avo indrindra 6369 metatra ny haavony manaraka akaiky ireo telo hafa. Ireo tendrombohitra izay entanin'ity havoana feno lanezy ity dia mahalala fa manana andraikitra sarotra be izy ireo ary izany mila teknika be dia be, hany ka tamin'ny taona 50 vao azo ny fandresena.
Tonga eo an-tampon'ny ranomandry any Peru ireo mpizahatany avy eo amin'ny tanànan'ny Huaraz, eo am-pototry ny tendrombohitra, ary fitsangatsanganana maro no atao ho fanampin'ny dia an-tendrombohitra. Azonao atao ohatra fitsidihana bisikileta an-tendrombohitra mandritra ny tontolo andro iray izay mampahalala anao ny Rajucolta Creek sy ny farihin'izy ireo ary haavo efatra arivo metatra. Raha te hiditra ny valan-javaboary ianao dia mila mandoa.
Ny marina dia ireto no sasany amin'ireo antsoina hoe tendrombohitra rakotra oram-panala ao Però. Mbola misy tendrombohitra hafa misy lanezy maharitra mandrakizay any Peroa, na dia marina aza fa ny tena mahafinaritra dia toa nifantoka tany amin'ny departemantan'i Ancash.
Raha tianao ny fanatanjahan-tena eny an-tendrombohitra ary mila izany fahitana an'izao tontolo izao izay tratra izany ianao, dia miandry anao i Peroa.
Huayna Picchu, harena any Peroa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Nevados avy any Peroa
Yeni dia hoy izy:
Inona no azoko lazaina, ao amin'ny peru misy tontolo voajanahary tsara tarehy afaka ho fantatra….
Valio i yeni
diego leandro dia hoy izy:
Tena tsara tokoa izany noho ny nahavitako nanao ny devoariko fialantsasatra…. Diego leandro el Cuero
Mamaly an'i diego leandro
ireo zava-mahatalanjona lehibe ananan'ny firenentsika dia tena mahavariana amin'ireo faritra rakotra oram-panala isaky ny peru
Tena tsara tarehy izany ary noho ny nahafahako nanome naoty tsara ho an'ny sekoly
angie shteffany ruiz mejia dia hoy izy:
Eny, tiako ny milaza aminao fa misaotra azy rehetra isika afaka mahita sy manao tsara ny entimodintsika ary tena ilaina koa ny mahafantatra momba ireo tendrombohitra feno lanezy misy lanezy any Peroa, misaotra betsaka !!!!
Valio angie shteffany ruiz mejia
nataliaandreus11 dia hoy izy:
I Peru dia manana tendrombohitra rakotra oram-panala tena tsara, na dia tsy avy any aza aho, dia toa tsara tarehy tokoa
Mamaly an'i nataliaandreus11
Pejy tsara, tiako ho fantatra raha manana hantsana ski ianao amin'ireo toerana ireo na farafaharatsiny raha vonjimaika izy ireo
Ireo tendrombohitra rakotra oram-panala ao Però dia ankasitrahana indrindra avy amin'ireo faritra iainana, fa tsy mijoro eo amin'ny lampihazo misy lanezy na ranomandry, izany no ankasitrahan'ny mponina ao Peroa sy izao tontolo izao azy. Hita fa tsy fantatr'izy ireo ny lagoon willcacocha any Ancash na i Switzerland of Cusco miaraka amin'ny Nevado Wacaywillque sy ny farihin'i Piuray sy Huaypo. Izany no fomba hankasitrahana, hikarakarana sy hitehirizana ireo tendrombohitra feno lanezy.
Mandehandeha amin'ny zotra Eropa amin'ny fitiavana amin'ny Andron'ny mpifankatia